उत्तर डकोटा (ND) २ द्वारा २ सोमबार, जुलाई N नम्बर (परिणाम) | लटरी.कट
परिणाम > नर्थ डकोटा >22 द्वारा > 07-06-2020
सोमवार, जुलाई 6, 2020 उत्तर डकोटा २ विजयी नम्बरहरू र परिणामहरू द्वारा
तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ सोमबार, जुलाई,, २०२० नम्बर नर्थ डकोटा २ का लागि २ यस पृष्ठमा एक पटक चित्र कोर्ने क्रममा। पछिल्लो लटरी जानकारीको साथ अद्यावधिक रहनको लागि, हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै पछिल्ला २०२० एनडी २ हेर्नुहोस् २ परिणामहरू
उत्तर डकोटा राज्य लोटरी खेलहरू
2by2 १०:१२ अपराह्न सीएसटी २-२2 देखि २ रातो, १-२1 देखि २ सेतो शीर्ष पुरस्कार १०:१२ अपराह्न सीएसटी दैनिक
उत्तर डकोटा लटरी प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
के म अज्ञात रहन सक्छु यदि मैले उत्तर डकोटामा लटरी जितें?
हो, उत्तर डकोटा मुट्ठीभर राज्यहरू मध्ये एक हो जसले विजेताहरूलाई अज्ञात रहन अनुमति दिन्छ।
एनडी लटरी आज कति छ?
तपाईं यहाँ नयाँ तपाईंको मनपर्ने खेलहरूको लागि नयाँ एनडी लटरी ज्याकपॉट मात्रा लोटरी.कटमा पाउन सक्नुहुन्छ उत्तर डकोटा लॉटरी ज्याकपट्स पृष्ठ।
मैले एनडी लोटरी जितें भने म कति करहरूमा तिर्ने छु?
$ 5,000 भन्दा बढी पुरस्कार 2.9% राज्य कर र २%% संघीय कर रोक्ने विषयको अधीनमा छन्।
ND लॉटरी जित प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
$ 600 भन्दा कम पुरस्कारहरू एक अधिकृत विक्रेतामा तुरून्त दावी गर्न सकिन्छ। एक विजेता खाता संग "छान्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्" खेलाडीहरूले फिर्ताको लागि अनुरोध गर्न सक्छ जुन १०-१-10 दिन भित्र प्रशोधन गरिनेछ, त्यसपछि विजेतालाई पठाइयो।
के म एनडी लोटरी टिकट अनलाइन खरीद गर्न सक्छु?
हो, एनडी लटरीसँग तिनीहरूको वेबसाइटमा सदस्यता विकल्प छ जुन अनलाइन टिकट खरीदहरूको लागि अनुमति दिन्छ।
उत्तर डकोटा लटरीको बारेमा
एनडी लोटरी २००२ मा स्थापना भएको थियो र आधिकारिक रूपमा २०० D मा मतको स्वीकृति पछि शुरू भयो, उत्तर डकोटा संविधानको एक पहल संवैधानिक संशोधन। उत्तर डकोटा केहि राज्यहरू मध्ये एक हो जुन केवल MUSL (बहु-राज्य लोटरी संघ) खेलहरूमा भाग लिन्छ, र राज्य-राज्य खेलहरू बेच्न सक्दैन। एनडी लोटरी टिकट बिक्रीबाट सबै राजस्वको २%% राज्य सामान्य कोषमा जान्छ।
एनडी लोटरीले निम्न लोटरी खेलहरू प्रदान गर्दछ: पावरबल, मेगा मिलियन्स, २ बाई २, लोट्टो अमेरिका, र जीवनको लागि भाग्यशाली।
उत्तर डकोटा राज्य लोटरीको बारेमा अधिक जान्न, कृपया अधिकारीलाई भेट्नुहोस् वेबसाइट.